तपाईंको फायरफक्स खोज बक्स अनुकूलन गर्नुहोस् (तपाईंको आफ्नै ब्लगको साथ!) | Martech Zone
तपाईं अब मेरो लागी लाग्छ कि म एक हुँ फायरफक्साहोलिक। मलाई ब्राउजर मन पर्छ ... यो हल्का र प्रयोग गर्न धेरै सरल छ। मलाई मनपर्ने अन्य सुविधाहरू मध्ये एक शीर्ष दायाँमा खोजी सूची अप हो। मसँग मेरा सबै मनपर्ने खोजी ईन्जिनहरू छन् र पछाडि र फ्लिप।
फायरफक्सका लागि खोजी ईन्जिन थप्न, तपाईंले केवल जानु पर्छ खोज इञ्जिन अन गर्नुहोस् पृष्ठ र क्लिक गर्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूलाई स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ।
तर के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं आफ्नै साइटको लागि एउटा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ? यो वास्तवमै एकदम सरल छ। खोज इञ्जिन प्लगइनका लागि ढाँचा XML फाईल (.src) र प्रदर्शनको लागि एक छविको संयोजन हो। आज राती, मैले विचार गरें ... म कसरी थप्न सक्छु मेरो साइट खोजी ईन्जिनहरूको सूचीमा?
यो वास्तवमै एकदम सजिलो छ। मेरो साइटको लागि मेरो खोजी ठेगाना (तपाईं यो मेरो खोजी बाकससँग परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ) हो http://martech.zone's=something जहाँ "s" भ्यारीएबल हो र केहि सर्च हो जुन खोजी गरियो।
यो साधारण फाराममा लागू गर्दै, मैले गतिविधिले src फाईल उत्पन्न गर्न केहि कोड लेखें जुन तपाईको ब्राउजरमा सर्च इन्जिन थप्न प्रयोग गरिन्छ। फारममा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको आफ्नै ब्लग वा साइट थप गर्नुहोस् (यदि यससँग खोजी क्षमताहरू छन्), तपाईंको आफ्नै ब्लगमा!
यदि तपाईं अरू कसैको ब्लग मन पराउनुहुन्छ, जस्तै जॉन चौ... तपाईं आफ्नो जोन चौ खोज ईन्जिनको साथ यो थप्न सक्नुहुन्छ s भ्यारीएबलको रूपमा! URL: http://www.johnchow.com/'s=something। मनपर्यो Problogger? तपाईं उही तरीकाले त्यो थप्न सक्नुहुन्छ!
मत्ती Cutts? URL: http://www.mattcutts.com/blog/ र s भ्यारीएबलका लागि।
अनुकूलित नभएसम्म s वर्डप्रेस ब्लगका लागि सधैं परिवर्तनशील हुन्छ त्यसैले यो वास्तवमै सहयोगी हुन सक्छ। आशा छ तपाईंलाई यो मनपर्‍यो!
तपाईंको ब्ल्गलाई तपाईंको खोजी ईन्जिन सूचीमा थप्नुहोस् ...
मार्स 2, 2007 मा 12: 04 एएम
म यस विधि मार्फत मेरो गुगल सीएसई थप्न कोशिस गर्दै छु तर मसँग समस्याहरू छन् ... म के छुँदैछु?
यो महान सामान हो .. धेरै धेरै डगलस धन्यवाद!
मार्स 2, 2007 मा 8: 24 एएम
म वास्तवमै अर्को कोशिस गर्दैछु। फायरफक्स स्रोत फाईलका लागि मार्ग कथनमा थोरै फिन्की छ। मैले यसलाई चलाउनको लागि चालमा पारेको थियो। मलाई एक दिन वा सोही समयमा एक नजर दिनुहोस् र म हामी के साथ आउन सक्छ देख्न सक्छौं। मैले अनुमान गरिरहेको छु कि यो कुनै प्रकारको मुद्दा हो जसमा बितेको पात्रहरु सँग छ।
मार्स 2, 2007 मा 10: 47 एएम
धेरै राम्रो भेटियो। म सँधै लिंकमा पोष्ट गर्न पोस्टमा जान्छु, यसले केहि समय बचत गर्दछ।
मार्क्स 2, 2007 मा 12: 38 PM
मैले स्वीकार गर्नु पर्दछ कि यो सेल्फ-सर्भिंग थियो। मैले बिर्सिएको चीजहरूको लागि निरन्तर मेरो आफ्नै साइट खोजी गर्दैछु। 🙂
मार्क्स 2, 2007 मा 3: 50 PM
मैले फेला पारे कि गुगल साइट खोजी (साइट प्रयोग गरी: कीवर्ड) सामान्यतया वर्डप्रेस आन्तरिक खोजी प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो परिणाम दिन्छ।